वर्तमान समय र परिवर्तनको कुप्रभाव – Chitwan Post
वर्तमान समय र परिवर्तनको कुप्रभाव
धार्मिक तथा पर्यटकीय एवं ऋषिमुनिहरुको तपोभूमि हिमशिखर, पहाड, तराई, विश्वमा परिचित सौन्दर्यरुपी मनोरम देश नेपालको वैदिक सनातन धर्म–संस्कृति, धार्मिक ग्रन्थबाट यसको प्रार्दुभाव भएको हुँदा मानिसको चेतना सभ्य, सुसंस्कृत र सुयोग्य नागरिकका रुपमा रहिआएको यथार्थता हो । यही आधारबाट आजसम्म समाज चलिरहेको छ । तर, वर्तमान अवस्थामा त्यसमा परिवर्तन आएको छ ।
नीतिगतरुपमा आएको आवश्यक परिवर्तन के हो ? जनताका माग र आकांक्षा के हुन् ? व्यवस्था र परिपाटी भनेको के हो ? धर्म–संस्कृति, नियम कानुन भनेको के हो ? भन्ने विषय नै प्रमुख विषय थियो, तर त्यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको महसुस भएको छ । समाजमा केही गर्नुपर्दछ भन्नेले इतिहास र संस्कारको खोजी गर्दछ । इतिहास नभएकोले इतिहास बनाउन खोज्ने प्रयत्न गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्दैन । उसले अरुको इतिहासको उपहास गर्दछ र त्यसैले आफूलाई अगाडि ल्याउन प्रयत्न गर्नु नै आजको मूल प्रश्नरुपी विषय भएको छ ।
देशलाई राम्रो बनाउन सभ्य समाज र संस्कृतिको विकास अनि जनजीविकाको ग्यारेन्टी नै आजको आवश्यकता हो भन्न उपयुक्त हुनेछ । तर, यसको प्रभाव कस्तो परेको छ भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्दछ । धार्मिक तथा सभ्य नागरिकबाट यो सम्भव छ । तबमात्र देश राम्रोसँग चल्दछ, शान्ति र विकास हुन्छ, देश सञ्चालन गर्ने व्यक्ति इमानदार, चरित्रवान्, नैतिकवान् भएमामात्रै त्यसले सञ्चालन गर्ने शासनव्यवस्था अति राम्रो हुन सक्दछ । जनमुखी सेवा, समर्पण, राष्ट्रप्रेमी हुने खालको मानिसले मात्र हामीले भनेका विचारको उच्च मूल्यांकन गर्दछ ।
आज देश रोइरहेको छ । हामीले सधैँ परिवर्तन परिवर्तनमात्रै भन्यौँ, तर के हो त्यो परिवर्तन भन्ने बुझ्न सकेनौँ । परिवर्तन भनेको पुरानो शासनभन्दा जनहितमा बढी राम्रो काम गर्ने, जनताका सबै समस्या समाधान गर्ने, सुशासन र विकास तथा सभ्य समाज निर्माण गर्नु हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । बजेट तथा कार्यक्रम दीर्घकालीन र जनपक्षीय सवालमा प्रभावहीन रहेका छन् । कर लगाउने र असुल गर्नेमात्रै हुँदा त्यसको प्रतिफल कर तिर्नेले पाएका छैनन् । सफल नीति नियम, इमानदारिता भएको शासनव्यवस्था, सचेत जनता, सक्षम र इमानदार तथा राष्ट्रभक्ति, नैतिक जिम्मेवारीसमेत भएको शासक रहेको देशमा मात्रै उज्ज्वल भविष्य तथा देशको विकास हुन सक्दछ । अनुभव र कुशल नेतृत्वबाट नै सबै प्राप्ति हुन सक्दछ । नेपालीलाई अब राजनेता तथा कुशल प्रजातन्त्रप्रेमी जनताको इच्छा र आकांक्षाको खोजी गर्ने, देशको ऐतिहासिक, धार्मिक संस्कृतिलाई बचाउँदै सभ्य र भव्यरुपमा अघि बढ्ने व्यक्तिको खाँचो छ ।
यसभन्दाअगाडि देशमा विभिन्न शासनप्रणाली आए । राम्रो अवस्था हुँदा धर्म–संस्कृतिअनुरुप चले, तर क्रूर तानाशाहीरुपबाट चल्दा पछि टिक्न सकेनन् । जनतालाई अधिकार कम थियो, जनता सचेत हुँदै जाँदा परिवर्तनको खोजी भयो । तत्कालीन अवस्थामा शासकबाट प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता खोज्नेलाई मारियो । टंकप्रसाद आचार्य, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले प्रजातन्त्रको आन्दोलन सुरू गरे । तत्पश्चात् २००७ सालमा प्रजातन्त्रको घोषणा भएपछि जनताको आवश्यकताको खोजी भएको हो । २०१५ सालमा बहुदलीय प्रणालीबाट आमनिर्वाचन भई नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला भएपश्चात् देशमा बजेटको व्यवस्था, मन्त्रालय गठन, योजनाको विकासको थालनी, सहकारी, भूमिसुधार तथा सुशासन, शिक्षा, परराष्ट्रनीति कर्मचारीको व्यवस्थाको थालनी भएको हो ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हटाएर पुनः एकतन्त्री शासनव्यवस्था सुरू गरेर तत्पश्चात् राजाले नयाँ मुलुकी ऐन २०१५ सालको कार्यक्रमको थालनी गरेका थिए । तर, प्रजातन्त्रको देशमा आवश्यकता नै थियो । प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले निरन्तर आन्दोलन गरिरहँदा पछि वामपन्थीहरु समेत सामेल भई २०४६ सालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भई परिवर्तनबाट नै देश विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, सहकारीको उदय भएको तथ्य हाम्रो सामुमा छ । त्यही आधारमा रहेर वर्तमानसम्म देश चलिरहेको छ ।
तर, विकासमा अगाडि बढिरहेकै बेला विभिन्न उतारचढाव आए । जनताको जीउधन मास्ने, हत्या र हिंसाको प्रवृत्ति हाबी भयो, जसले देशलाई यस अवस्थामा ल्याएको छ । आज राम्रो परिपाटी र सुशासन तथा शान्ति छैन देशमा । सबै प्रकारका विकृति तथा भ्रष्टाचाररुपी फोहोरका थुप्रा छन् । वर्तमान अवस्थामा देश ज्यादै आक्रान्त अवस्थामा छ । जहाँ पनि अधिकार अधिकारको खोजी भैरहेको छ, अधिकार दिने र लिनेको होडबाजी चलिरहेको छ ।
जननिर्वाचितहरु अहिले सत्तासीन भएका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीयसम्ममा सरकार छ, जसले सेवासुविधा र अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन्, तर जनताले न्याय खोजिरहेका छन् । जनताका सबै आकांक्षा तथा विकासमा ध्यान नदिई पार्टीगत स्वार्थ, कार्यकर्ताको पालनपोषण, गुन्डागर्दी र सत्तामोहमात्रै रहिरहे भाषण र झूटको खेती सधैँ चल्न नसक्ने निश्चित छ । किनभने, संसारभरि क्रूर शासक जनताबाट टाढा भैसकेका छन् । जनताको प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रतामा बाँच्ने अधिकार कुनै शासकले रोक्न सक्दैन, यो भगवान्ले दिएको अधिकार हो । तसर्थ, जनतालाई सर्वोपरि मानी काम गर्नुभन्दा अर्को नेताहरुसँग विकल्प छैन ।